အယ်လ်ဂျီးရီးယား - ရိုဝီဘီသည်မကြုံစဖူးငွေကြေးစျေးကွက်တွင်ရင်ဆိုင်နေရသည် - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » စီးပွားရေး အယ်ဂျီးရီးယား - ရူဘီသည်မကြုံစဖူးငွေကြေးစျေးကွက်ကိုရင်ဆိုင်နေရသည် - JeuneAfrique.com
အယ်လ်ဂျီးရီးယားရှိ fruity အချိုရည်၏ခေါင်းဆောင်သည်အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူအသစ်တစ် ဦး ၏ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုလေ့လာနေကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်သတိပေးအချက်ပြခြင်း ... ကြီးမားသောဘဏ္difficultiesာရေးအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ခြင်း သစ်သီးဖျော်ရည်အချိုရည်များအတွက်အယ်ဂျီးရီးယားနာမည်ကြီး NCA Rouiba သည် ၄ ​​င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများ၊ သူဖြေရှင်းသည့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်လေ့လာမှုများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့် ၄ င်း၏အကောင့်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်မျှဝေသည်။
အခြေအနေကဘာလဲ? NCA Rouiba သည်၎င်း၏တည်ရှိမှုတွင်အကြီးအကျယ်ငွေကြေးပြworနာများကြုံတွေ့ရကြောင်းနိုဝင်ဘာ5တွင်ကြေငြာခဲ့သည် ပါးလွှာ Othmani, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌရှယ်ယာရှင်များ, စားသုံးသူ, ပေးသွင်းသူများနှင့်မိတ်ဖက်ဖို့အများပြည်သူစာ၌။
အခက်အခဲအတိုင်းအတာကိုကိန်းဂဏန်းများမတင်ပြခဲ့သည့်ခေါင်းဆောင်က“ ငွေထိတ်လန့်ခြင်း” အကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအဖွဲ့၏ဘုတ်အဖွဲ့သည်ကုမ္ပဏီ၏အရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ခြင်း (လက်ရှိ 849 195 အယ်လ်ဂျီးရီးယားဒိုင်နိုဆော - ဆိုလိုသည်မှာယူရိုငွေသန်းသန်းဝန်းကျင်) သို့မဟုတ် - အသစ် "မဟာဗျူဟာနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ္partnerာရေးမိတ်ဖက်" မှဖွင့်လှစ် (2014 Crevital သည် Rouiba ၏ 15% ကိုပိုင်ဆိုင်သည်).
စလင်းမ်အွန်မန်နီက 1966 တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီအတွက်ဤမကြုံစဖူးသောအခြေအနေ၏မူလရင်းမြစ်အဖြစ်အချက်များအမျိုးမျိုးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် -“ တိုင်းပြည်ကိုရိုက်ခတ်သောစီးပွားရေးအကျပ်အတည်း”၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွင်း“ ငွေတောင်းခံလွှာမပါသောအလေ့အကျင့်များပေါက်ကွဲခြင်း” ၏ "အားနည်းနေဒိုင်းနမစ် အဆိုပါအယ်လ်ဂျီးယားစတော့အိတ်ချိန်းSlim Othmani ကသူ၏ထုတ်ပယ်မှုတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုရရန်၊
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အစီအမံများအရအဖွဲ့သည်၎င်း၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နှင့်အခြားအစီအမံများအင်အားသုံးသို့မဟုတ်လေ့လာနေ: ကြွေးမြီ၏ဖြေရှင်းမှုအတွက်တရားစွဲဆိုမှုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူငွေပေးချေမှု၏နိဒါန်း, အာမခံ၏အယ်လ်ဂျီးရီးယားကုမ္ပဏီအားဖြင့်ငွေပေးချေမှုမရှိခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုဖုံးလွှမ်း နှင့်ပို့ကုန်အာမခံချက်များ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊
ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည်“ လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်၏ရလဒ်များကိုအလွန်ယုံကြည်မှုရှိလျှင်” ပင်လျှင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေကိုခိုင်မာစေရန်အတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင်အထွေထွေညီလာခံတွင်မကြာမီတင်ပြလိမ့်မည်။ တိုးတက်မှု